Degso Ultra Adware Killer loogu talagalay Windows
Bilaash Degso loogu talagalay Windows (6.14 MB)
Degso Ultra Adware Killer,
Carifred waxay ku soo jiidanaysaa feejignaan qalabkeeda fudud laakiin waxtar u leh Windows, waxayna qabataa shaqo la mid ah waxayna ka caawisaa kumbuyuutarrada dalab loo yaqaan Ultra Adware Killer. Codsigani wuxuu kaa caawinayaa inaad ka saarto barnaamijkaaga Adware ee waxyeeleeya kombiyuutarkaaga. Haddii ay koonto kale ku jiraan kumbuyuutarka, uma baahnid inaad furto akoon kale isticmaale markasta, taasna waxaa ugu mahadcelinaya barnaamijka sameeya iskaanka iyaga.
Iyada oo loo yaqaan Ultra Adware Killer, oo meesha ka saareysa baararka qalabka, waxyaabaha lagu daro, fidinta iyo makiinadaha raadinta ee aan loo baahnayn ee lagu rakibay daalacashada, waxaad sidoo kale ka takhalusi kartaa noocyada Adware ee la wareegay boggaaga bilowga. Gaar ahaan kuwa khibradooda isticmaale ay isu rogtay tayo xumo sababo la xiriira xayeysiisyada aan loo baahneyn ee ku dhaca inta ay socdaan internetka, codsigan wuxuu u noqon doonaa sida daawo oo kale.
Haddii aadan aqoon siyaabaha aad ugu baahan tahay inaad kula xiriirto markaad adeegsanayso dalabka, waxaa suurtagal noqon doonta inaad ka soo qabato talooyinka isticmaalka goobta rasmiga adigoo riixaya furaha F1. Haddii aad raadineysid xal bilaash ah oo wax ku ool ah, codsigan ayaa sidoo kale soo jiitay dareenka waxqabadkiisa dhakhso iyo guuleysiga
Ultra Adware Killer Noocyada
Cabirka Faylka: 6.14 MB